အရောင်းအရောင်းရွေးသော Seal Seal Kits လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးစက်ရုံများကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချသောအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို Gasket 1D manutacturing | 1D;ONE
ဆလင်ဒါ Cushion သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်ပြီးအောက်ခြေဖြစ်သောဆလင်ဒါခေါင်းကို၎င်း၏အခန်းကဏ္ applight အကြားတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ဆလင်ဒါတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ရေနံဆလင်ဒါလက်ကိုင်ဖုန်းကိုထိန်းထားရန်ဖြစ်သည် ဖိအားပေးမှုအောက်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အအေးခံခြင်းနှင့်အအေးခံခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဖိအားများနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းဓာတ်ငွေ့သည်မြင့်မားသောဖိအားနှင့်အအေးခံခြင်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ထိပ်မျက်နှာပြင်နှင့်ဆလင်ဒါခေါင်း၏အောက်ပိုင်းမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေမျက်နှာပြင်နှင့်မကျေပွန်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါဆလင်ဒါခေါင်း၏ပုံသဏ္ on ာန်ကိုပုံပျက်ခြင်းနှင့်ဆလင်ဒါခေါင်း၏ပုံပျက်မှုများကိုလျော်ကြေးပေးရန် elasticity အချို့ရှိသင့်သည်။
1D Auto Corporation သည်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်တောင်အာရှ Guang Zhou စီးတီးတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပစ္စတင်, လက်စွပ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအစုအဝေး, စသည်တို့ Toyota, Mitsubishi နှင့် ISUZU OEM ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်ပူးပေါင်းသည့်တရုတ်၏ထိပ်တန်းသုံးပင်းအိုးနှင့်0တ်စုံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ 1D ကုမ္ပဏီမဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ 1. ခိုင်မာသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းစနစ် - အင်ဂျင် 1600 ကျော်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 1600 ကျော်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS ပစ္စတင် 300,000 PCS ပစ္စတင်လက်စွပ်။ 2.factility & လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ Bosch / Siemens စက်များ, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 အတည်ပြုခဲ့သည်။ 3. စက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့မှုနှင့်လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာ - စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်အတွက်တောင်တရုတ်ပင်လယ် Zhou စီးတီးရှိစက်ရုံဂိုဒေါင်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ပါ။ 4. ကတ် orientated & ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်လှစ်,